Fotoana izao hampiodina ny orinasanao | Martech Zone
Alarobia, Jona 3, 2009 Talata, Desambra 31, 2013 Douglas Karr
Rehefa manoritsoritra ny ambaratongam-pitantanan'izy ireo ny orinasa dia mazàna mahazo sary mahafinaritra ianao izay mamaritra ny mpiasa alehany. Ireo manana ny fahefana sy ny onitra dia voatanisa eo ambony hatrany… araka ny filaharan'ny zava-dehibe .
Tsy mahagaga izany. Io dia mametraka ny mpanjifa eo amin'ny farany ambanin'ny ambaratonga ambony. Ireo mpiasa mifampiraharaha amin'ny vina sy mpanjifa isan'andro dia matetika no ambany karama, tsy manana traikefa, be asa loatra ary misy dikany loharanon'olombelona ao amin'ny orinasa. A fisondrotana mifindra solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa izy manomboka amin'ny mpanjifa ary miditra amin'ny andraikitra fitantanana misy ny olana nihamafy ho an'ny mpitantana. Tsy maintsy hitranga izany satria tsy manana fahatokisana, fahefana na fahefana hanao ny fanovana ilaina ny mpiasa fenoy ny andrasan'ny mpanjifa.
Efa nieritreritra an'io ve ianao a mpanjifa? Laharam-pahamehana ianao ambany ny an'ny mpiasa ambany indrindra. Ireo mpiasa manana karama farany ambany, fotoana fohy indrindra ary kely vintana fampiroboroboana na fanararaotana. Nice. Tsy mahagaga raha maninona mikomy ny mpanjifa!
Namana Kyle Lacy vao tsy ela akory izay nandinika ny bokin'i Jason Baer, ​​Convince ary niova fo:
Araka ny tenin'i Jason, ny media sosialy no lohalaharana amin'ny fanandramana mpanjifa. Ny eritreritra sy ny hevitry ny marika dia tsy namboarina intsony tao amin'ny efitranon'ny birao (izay te-hino ny olona maro) fa noforonina tao amin'ny efitrano fandraisam-bahinay, trano fisakafoanana, toerana fanangonana ary fitendry.
Rehefa mamaky momba ny fahombiazan'ny Zappos ianao, Tony Hsieh dia manohy manompo ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny fomba manome hery ny solontenan'ny serivisy hanampiana ny mpanjifa. Na dia eo ambanin'ny ambaratongam-pahavitrihana aza izy ireo, Zappos namadika tamin'ny fomba mahomby ny ambaratongam-pahefana.
Fotoana tokony handosiran'ny orinasa rehetra ny tatitra atypical sy ny firafitry ny herinaratra ary nivadika izany. Ny mpanjifa dia tokony hapetraka eo an-tampon'ny ambaratongam-panjakanao, ny mpiasanao laharana voalohany dia tokony homena fahefana sy hatokisana handray fanapahan-kevitra tsara ho an'ny mpanjifa. Ny mpitantana, ny talen-tsekoly ary ny mpitarika anao dia tokony ho izy mihaino ho an'ny mpiasa miatrika ny mpanjifa ary mamolavola paikady maharitra mifototra amin'ny fidiran'izy ireo.
Arakaraka ny fiasako miasa amin'ny orinasa no ahalalako fa ny mpitondra lehibe indrindra dia ireo izay mampiasa loharanon-karena amin'ny fomba mahomby, manala ny sakana, manome hery ny mpiasa ary tena manolo-tena. rehetra mpanjifa. Ny efitrano fandraisam-bahiny miady amiko rehetra izay tsidihiko dia feno mpanao zava-mahadomelina be voninahitra izay mihevitra fa izy ireo no lakilen'ny fahombiazany manokana, fa mendrika ny ho eo amin'ny toerana misy azy ireo izy ireo ary mahafantatra tsara kokoa noho ny mpanjifa.
Vokatra iray mahafinaritra amin'ity resa-be ity dia ny fahitantsika ireo olona nilatsaka toy ny lalitra ireo. Ahoana ny fahitan'ny Customer Hierarchy amin'ny orinasanao? Eo an-tampony na eo ambanin'ny rojo vy ve izy ireo? Eritrereto izany.
Tags: Customerentin'ny mpanjifampanjifa fanohananaLeadership
4 Jun 2009 amin'ny 1:21 AM
Lahatsoratra tsara Doug. Sakafo ho an'ny eritreritra amin'izao andron'ny CEO izao izay be loatra no mihevitra fa ny orinasa no manana ny poketrany manokana. Mpanjaka ny mpanjifa - fa tsy ny mifanohitra amin'izay.
4 Jun 2009 amin'ny 10:47 AM
Lahatsoratra tena mahaliana, na dia sarotra kokoa aza ny fanatanterahana azy.
Jun 4, 2009 ao amin'ny 1: 39 PM
Ny fahombiazana, ny fandrosoana ary ny fanovana dia sarotra kokoa ny manatanteraka azy noho ny status quo sy ny tsy fahombiazana. 🙂
Jun 4, 2009 ao amin'ny 2: 04 PM
Rehefa niasa tamin'ny iray amin'ireo mpitatitra tsy misy tariby lehibe aho dia nahagaga ahy foana ny fomba nametrahan'izy ireo lalandava ny politika izay nanery ny mpivarotra / serivisy hahafahana manao LESS ho an'ny mpanjifa. Ary manontany tena izy ireo hoe maninona no ambany dia ambany ny fihazonana azy ireo. Ireo orinasa, na inona na inona "vokatra" nentin-drazana, dia mila mahatsapa fa ao amin'ny indostrian'ny serivisy avokoa izy ireo.
5 Jun 2009 amin'ny 7:14 AM
Atsofohy ny firafitry ny herinaratra ary ahodino…
Lahatsoratra mamirapiratra Doug ary misaotra amin'ny rohy.
Ny bilaogin'i Jason Baer dia mendrika indrindra amin'ny fotoana famakiana.